बिहान खाली पेटमा पानी पिउनु फाईदा कि बेफाईदा ? जान्नुहोस् यी नौ तथ्य | NepalDut
बिहान खाली पेटमा पानी पिउनु फाईदा कि बेफाईदा ? जान्नुहोस् यी नौ तथ्य
पानी पिउदा पनि धेरै समस्याको समाधान हुन्छ। अधिकांश रोग पेटमा नै उत्पन्न हुन्छन् त्यसैले खाली पेटमा पानी खानुको अर्थ धेरै छ। यसको प्रमुख फाइदा पेट स्वस्थ बनाउनु हो । खाली पेट पानी खादा स्वास्थ्यमा फाइदा हुने तथ्य सर्वप्रथम जापानमा प्रमाणित भएको हो। प्राय जापानीले बिहान उठ्नेवित्तिकै चार गिलास पानी खान्छन्।